ပြည့်သော်၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
*** ၂၄ ပစ္စည်း ၊ အသံထွက် နှင့် အဓိပ္ပါယ် ပါသော iPahtan 1.2 IPA (English/မြန်မာ အဓိပ္ပါယ်နှင့်အသံထွက်) (iPhone/iPad/iPod ကိုင်သူများအတွက်သာလျှင်) ***
Started Oct 22, 20130Replies3Likes
phyuthi သည်ပြည့်သော်ကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
မေ 14, 2015
မင်းနိုင် သည်ပြည့်သော်'s ၏ '*** မြတ်စွာဘုရားရှင် ၏ တစ်ရက်တွင် ၁နာရီနှင့် မိနစ်၂၀ သာကျိန်းစက်တော်မူပုံ ***' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ညီပု liked ပြည့်သော်'s discussion *** ၂၄ ပစ္စည်း ၊ အသံထွက် နှင့် အဓိပ္ပါယ် ပါသော iPahtan 1.2 IPA (English/မြန်မာ အဓိပ္ပါယ်နှင့်အသံထွက်) (iPhone/iPad/iPod ကိုင်သူများအတွက်သာလျှင်) ***
Thukha Nadi သည်ပြည့်သော်'s ၏ '*** မဟာစည် ဆရာတော် နှင့် နတ်မင်းကြီး စကားပြောတိပ်ခွေ ***' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ပိသေးလေး သည် ပြည့်သော်'s၏ '*** မဟာစည် ဆရာတော် နှင့် နတ်မင်းကြီး စကားပြောတိပ်ခွေ ***'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"ကြော်ငြာတွေကို ကလစ်ဝင်ပေးခဲ့ပါတယ် . . .ဒါပေမယ့် စက်က facebook သုံးမရလို့. . ."
Maung Lwin သည်ပြည့်သော်'s ၏ '*** မဟာစည် ဆရာတော် နှင့် နတ်မင်းကြီး စကားပြောတိပ်ခွေ ***' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
အေးမင်းဇော် သည် ပြည့်သော်'s၏ '*** မဟာစည် ဆရာတော် နှင့် နတ်မင်းကြီး စကားပြောတိပ်ခွေ ***'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"မိတ်ဆွေ ကျေးဇူးအမျာကြီးတင်ပါတယ် ကျွန်တော်လည်ရှာနေတာ ကြာပြီ online ပေါ်ကိုတင်ပေးတဲအတွက် အရမ်းကောင်းပါ တယ် ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာပါစေ..."
Tun Tun Win သည်ပြည့်သော်'s ၏ '*** မဟာစည် ဆရာတော် နှင့် နတ်မင်းကြီး စကားပြောတိပ်ခွေ ***' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
*** မဟာစည် ဆရာတော် နှင့် နတ်မင်းကြီး စကားပြောတိပ်ခွေ ***
၁၉၅၁ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ကာလ မဟာစည် ဆရာတော် နှင့် နတ်မင်းကြီး တစ်ပါး စကားပြောခဲ့သည့်တိပ်ခွေfile ကိုလွန်ခဲ့သည့် သုံးနှစ်ခန့်က website တစ်ခုတွင်တွေ့၍ download ယူထားပါသည် ။ပုသိမ်မြို့မှ ယောဂီတစ်ဦး ထူးဆန်းသောစကား ပြောနေ၍ လေ့လာရာ ပါဠိသံနှင့်ဆင်တူသဖြင့် သိနားလည်သူမှနားထောင်ရာ နတ်တစ်ပါး ဝင်ပူးပြီး မဟာစည် ဆရာတော်နှင့်…See More
ပြည့်သော် သည် thein wai's၏ 'အသံကိုလုပ်၍ တရားဟောရာ၌ အပြစ် ၅ ပါး။'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ပြည့်သော် သည် A BuddhismworldAdmin's၏ 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ် စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"“ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ" ဆိုဒ်ကို ဖန်တီးပေးတဲ့ အတွက် အတိုင်းထက်အလွန်ဝမ်းသာပါတယ်။ ကမ္ဘာတည်ရှိနေသ၍ “ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ" ဆိုဒ်မပျက်သုန်းစေသား..."
Maung Lwin သည်ပြည့်သော်'s ၏ '*** မြတ်စွာဘုရားရှင် ၏ တစ်ရက်တွင် ၁နာရီနှင့် မိနစ်၂၀ သာကျိန်းစက်တော်မူပုံ ***' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
သင်းသင်းအောင် သည်ပြည့်သော်'s ၏ '*** မြတ်စွာဘုရားရှင် ၏ တစ်ရက်တွင် ၁နာရီနှင့် မိနစ်၂၀ သာကျိန်းစက်တော်မူပုံ ***' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
kham သည်ပြည့်သော်'s ၏ '*** ၂၄ ပစ္စည်း ၊ ပရိတ် အသံထွက် နှင့် အဓိပ္ပါယ်ပါသော MM Hub Payate v.1.0 APK (Android Phone ကိုင်သူများအတွက်ပါ) ***' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
hla moe 24 သည် ပြည့်သော်'s၏ '*** ၂၄ ပစ္စည်း ၊ ပရိတ် အသံထွက် နှင့် အဓိပ္ပါယ်ပါသော MM Hub Payate v.1.0 APK (Android Phone ကိုင်သူများအတွက်ပါ) ***'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
ဒီဘလော့ကို နိုဝင်ဘာ 2, 2013 တွင်6:57pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments4Likes
၁၉၅၁ ခုနှစ် ပတ်ဝန်းကျင်ကာလ မဟာစည် ဆရာတော် နှင့် နတ်မင်းကြီး တစ်ပါး စကားပြောခဲ့သည့်တိပ်ခွေ
*** ၂၄ ပစ္စည်း ၊ ပရိတ် အသံထွက် နှင့် အဓိပ္ပါယ်ပါသော MM Hub Payate v.1.0 APK (Android Phone ကိုင်သူများအတွက်ပါ) ***
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 22, 2013 တွင်6:19pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments 1 Like
ယနေ့ယခုမှာတော့ Android phone ကိုလည်း လူတိုင်းလိုလို ပိုင်ဆိုင်နေကြပါပြီ။ သို့ပေမယ့် ဘာလို့ ဓမ္မ Application တွေကို ထည့်ဖို့ သတိမရကြလဲ? ဒီတစ်ခါတော့ iPhone/iPod/iPad အတွက်တင်ထားခဲ့တဲ့ ပိုစ့်မှာ Samsung အတွက် တောင်းဆိုနေလို့…
*** မြတ်စွာဘုရားရှင် ၏ တစ်ရက်တွင် ၁နာရီနှင့် မိနစ်၂၀ သာကျိန်းစက်တော်မူပုံ ***
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 22, 2013 တွင်4:12pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment4Likes
မြတ်စွာဘုရားရှင် ၏ တစ်ရက်တွင်
၁နာရီနှင့် မိနစ်၂၀ သာကျိန်းစက်တော်မူပုံ
မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာ ၁ရက် ၂၄နာရီအနက် ၁နာရီနဲ့…
ဒီဘလော့ကို အောက်တိုဘာ 21, 2013 တွင်10:08pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။2Comments0Likes
ယနေ့ မျက်မှောက်ကာလမှာတော့ နည်းပညာတွေ အဖုံဖုံတိုးတက်နေပါပြီ။ ခုလူတိုင်းလိုလို Phone တစ်လုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။ သို့ပေမယ့် ဘာလို့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Applications တွေကို ဘာလို့ထည့်ဖို့ သတိမထားမိကြလဲ?
ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူတွေ အတွက်…
8:33pm အချိန်မေ 14, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
11:06am အချိန်မေ 14, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
6:17pm အချိန်အောက်တိုဘာ 21, 2013, တွင် လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။